WARBIXIN: Kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo isku heysta daafac wanaagsan oo ay kooxdiisu u dhacday heerka labaad | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » WARBIXIN: Kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo isku heysta daafac wanaagsan oo ay kooxdiisu u dhacday heerka labaad
WARBIXIN: Kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo isku heysta daafac wanaagsan oo ay kooxdiisu u dhacday heerka labaad
Daafaca dambeedka dhexe ee reer England Ben Gibson ayaa lagu soo waramayaa inuu diiradda u saaran yahay kooxaha Chelsea iyo Liverpool kuwaasoo doonaya inay kusii celiyaan horyaalka England Premier League.
Kooxda Middlesbrough ee u laabatay heerka labaad ayaa daaha ka qaaday in aysan iibin doonin Ben Gibson, balse Chelsea iyo Liverpool ayaa xiiso dhab ah u qaba daafacaan, sida ay sheegeyso majaladda Daily Mail.
Hase yeeshee, milkiilaha kooxdaan Steve Gibson wuxuu doonayaa inuu ceshado wiilkaan uu adeerka u yahay, si ay kooxdiisu ugu soo laabato horyaalka Premier League si dhaqsi ah.
25 sanno jirkaan ayaa bishii March loogu yeeray xulka qaranka England, waana xiddig mustaqbal sarre leh, waana sababta ay xiisaha weyn ugu qabaan kooxaha Chelsea iyo Liverpool. Gibson ayaana kasoo baxay akadeemigga kooxda Middlesbrough.